Umzi mveliso weSouce - China Abenzi beSouce, abaXhasi
Yenziwe ngembewu yesesame ethosiweyo kunye neenkozo zamandongomane, intlama yesediyam exutyiweyo yintlama engqindilili, emdaka, enevumba elinamandla, nelihlukile. Isetyenziswa ngokubanzi kukutya kwamaTshayina okanye ama-Asiya, ii-noodles, isaladi, isosi yokutshisa imbiza eshushu, iibuns ezijijiweyo okanye njengokunwenwa njengebhotolo yamandongomane. Ngokwesiqhelo kuthengiswa kwiijagi zeglasi, kunye nomaleko weoyile ngaphezulu ukugcina ukutsha kwayo. Ukupakisha ngobuninzi kunye nenkonzo ye-OEM iyafumaneka, wamkelekile ukuthumela iimfuno zakho kuthi.
Yenziwe ngembewu yesesame egalelwe i-toame, i-sesame unamafutha aqinileyo, abrown, kunye nencasa eyomeleleyo, eyahlukileyo yenutty. Isetyenziswa ngokubanzi kukutya kwamaTshayina okanye ama-Asiya, ii-noodles, isaladi, isosi yokutshisa imbiza eshushu, iibuns ezijijiweyo okanye njengokunwenwa njengebhotolo yamandongomane. Ngokwesiqhelo kuthengiswa kwiijagi zeglasi, kunye nomaleko weoyile ngaphezulu ukugcina ukutsha kwayo. Ukupakisha ngobuninzi kunye nenkonzo ye-OEM iyafumaneka, wamkelekile ukuthumela iimfuno zakho kuthi.
Ibhotolo yamandongomane 510g
Isosi yeSoya yeOrganic
Isosi yesoya yesoya ibhekisa kwisosi yesosi ekhuliswe ngezityalo eziphilayo njengezinto ezingafunekiyo. Isosi yesosi ye-organic iqulethe incasa etyebileyo yesosi yesosi kunye namanqatha, yinto enqabileyo esemgangathweni, efanelekileyo yokuntywila, eyosiweyo kwisosi yesosi, ukugcwalisa, isuphu, ukuvuthisa i-fry, njl. Icocekile kwaye isempilweni kunokutya okuluhlaza.
Amava amatsha okungcamla ka rose kunye neviniga
Iiroses ezikhethiweyo ezinokutyiwa, emva kokuvubela kwendalo, ulwelo lweviniga yethu icacile, inencasa, inencasa emuncu kunye nencasa encinci.
Iindlela ezintsha zokusela iviniga:
Nciphisa iviniga kwi-1: 6 kwaye uyixube kunye nobusi ngokokuthanda kwakho. Yonwabela ivumba leentyatyambo kunye nelakho ivumba.
Isonka sePonzu Soy (Isosi yokuntywila)
I-Ponzu soy sauce yenziwe nge-soy sauce yaseJapan kunye nejusi ye-lemon egxininisiweyo, ngoko ke imveliso yokugqibela iyakuthandeka, i-flavour enamakha kunye nokulungelelaniswa okuhle. Inebhalansi egqibeleleyo enetyiwa, ebuswiti kunye nencasa yokuphucula incasa yenyama eyosiweyo, iinkukhu, ukutya kwaselwandle okanye imifuno. Kukulungele ukuntywila kwidombolo, i-barbecue kunye nesaladi.
Ikhukhi yeLadyfinger, Umtya weHawthorn, Ukutya amandongomane anetyuwa, Iipakethi zesosi yeSoy, Intonga yeBhontshisi entsha, Iibhiskithi zaBantwana,